Bannaanbax ka socda Suuqa Degmada Wadajir ee Magaalada Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Bannaanbax ka socda Suuqa Degmada Wadajir ee Magaalada Muqdisho
Magaalada Muqdisho, gaar ahaan Degmada Wadajir waxaa ka socda Banaanbax ay dhigayaan dadka ganacsatada ah ee ku ganacsada Suuqa weyn ee Degmada Wadajir oo shalay dil uu ka dhacay.
Wararka waxa ay sheegayaan dadka ganacsatada ah ee Banaanbaxa dhigaya inay ka careysan yihiin dilkii shalay Suuqa Degmada Wadajir loogu geystay labo ruux oo ganacsatada ka mid ahaa.
Ganacsatada ayaa waxa ay xireen wadada laamiga ah ee Bartamaha ka marta Suuqa Degmada Wadajir, waxaana ay diideen gaadiidka halkaasi maraayay inay maraan.
Guddoomiyaha Degmada Wadajir ayaa ku soo baxay dadka ganacsatada ah ee Banaanbaxa dhigaayay, waxaana uu u sheegay inay joojiyaan Banaanbaxa, wadooyinkana ay furaan.
Dadka ganacsatada ah ayaa ka biyo diiday baaqa Guddoomiyaha ee ku aadan inay joojiyaan Banaanbaxa wadooyinkana ay furaan, waxaana ay sii wateen Banaanbaxooda.
Shalay ayeey aheyd markii Suuqa Degmada Wadajir lagu dilay labo ruux oo ganacsatada ka mid ahaa, kaasi oo toogtay Askari ka tirsan ciidamada Dowladda.
Ciidamada qaada canshuuraha ayaa wax ka yar 5 kun oo Shilinka Somaliga ah u dila dadka ganacsatada ah.
Munaasabada Dhaarinta Xildhibaanada cusub oo goor dhaw bilaabatay (Daawo Swirada)
Jubbaland oo faah faahin ka bixisay dagaalo ka dhacay jubooyinka